EUR 1.43 Million Project for the Elderly and Disable | Myanmar Business Today
HomeBusinessEUR 1.43 Million Project for the Elderly and Disable
EUR 1.43 Million Project for the Elderly and Disable
European Union will fundaEUR 1.43 million project supporting older people and those with disabilities affected by the COVID-19 in Myanmar reaching five million people.
The project will be implemented by the Ministry of Health and Sports and HelpAge International.
In its COVID-19 response plan, the Ministry of Health and Sports has recognized the need for targeted measures to protect older people and people with disabilities. Through this new EU-funded project, HelpAge is providing direct support to enable communities to better protect at-risk-groups.
The project will include various programs such as providing personal protective equipment for care volunteers and around 3,600 front-line health workers, installing handwashing facilities, establishing and operating isolation wards for older people and people with disabilities, and providing life-saving non-communicable disease screening and referral services atatime when accessing clinics is difficult.
In cooperation with the Department of Social Welfare, the project will provideaone-off K30,000 payment to 5,000 people with disabilities to help recipients and their families endure the economic impact of the pandemic.
Death rates are higher among older age groups due toagreater likelihood of underlying health conditions, such as heart and respiratory disease, diabetes, and cancer, that cause potentially severe complications.
The pandemic has exacerbated difficulties accessing healthcare and regular incomes, which can disproportionately impact older people and those with disabilities who may already be struggling. As COVID-19 shuts down markets and curtails other ways of earning money, this inequality risks pushing hundreds of thousands of people into poverty.
ဥရောပသမဂ္ဂသည် COVID-19 ကြောင့် ထိခိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံမှ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများကို ကူညီထောက်ပံမည့် စီမံကိန်းအား ယူရို ၁ ဒသမ ၄၃ သန်း (မြန်မာကျပ်ငွေ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ) ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး လူဉီးရေငါးသန်းကျော်ကို အကူအညီပေးနိုင်မည်ဟု ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည်။
ယင်းစီမံကိန်းကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့တို့က ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။
COVID-19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်တွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများကို ကာကွယ်ရန် သီးသန့်အစီအစဉ်များလိုအပ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတိပြုမိခဲ့ကာ ယခုစီမံကိန်း၌ ဥရောပ သမဂ္ဂသည် COVID-19 ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ အရှိဆုံးသူများကို တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။
COVID-19 ရောဂါအား ရှေ့တန်းမှ ကုသပေးနေသည့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ၃၆၀၀ခန့်နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို PPE ဝတ်စုံများ ထောက်ပံ့ခြင်း လက်ဆေးဘေစင်များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် မသန်စွမ်းများအတွက် သီးသန့်စောင့်ကြည့် လူနာဆောင်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ အသက်ကယ် မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါရှာဖွေ စစ်ဆေးမှုများနှင့် ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းများကိုလည်း ယခုစီမံကိန်းက ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုအပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်း ဦးရေ ၅၀၀၀ ကျော်ကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ်ငွေသုံးသောင်းနှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့မည်လည်း ဖြစ်သည်။
COVID-19 ရောဂါသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွန်းသူများကို အထူးအန္တရာယ် ရှိစေပြီး သေဆုံးမှုနှုန်းမှာ ရောဂါပြင်းထန်စေနိုင်သည့် နှလုံး၊ ဆီးချို၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့် ကင်ဆာကဲ့သို့ နဂိုရောဂါအခံ ရှိသည့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများကြားတွင် မြင့်မားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
COVID-19 ရောဂါကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမှီရန် ခက်ခဲမှုများ ကြီးထွားလာပြီး ယခင်ကတည်းက ရုန်းကန်နေရသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် မသန်စွမ်းများအပေါ် အချိုးစားမညီသော သက်ရောက်မှုများ ရှိလာနိုင်ကြောင်းနှင့် စျေးများပိတ်ထားခြင်းသည် ဝင်ငွေရလမ်းကို ကန့်သတ်ခံထားရခြင်းဖြစ်ရေ သိန်းချီသောသူများကို ဆင်းရဲတွင်းသို့ တွန်းပို့သကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Previous articleFood & Agriculture System to Be Implemented Across the Country
Next articleState Counsellor Urges Fishery Sector to Enter Global Market